Calaamadaha: Umgang Mit Unerwünschten E-Mails Und Spam
Weligaa ma furay e-mailkaaga oo waxaad heshay in ka badan hal kun oo e-emayl aan rasmi ahayn ee sanduuqaaga, 95 boqolkiiba oo aadan xiiseyneynin akhriska? Inta badan, waxaa laguugu soo diri doonaa inaad tirtirto emailka halkan iyo halkaan, laakiin shaqada ayaa laga yaabaa inay lug ku yeelato adiga oo u eegaya inaad u baahan tahay inaad hubiso inaadan tirtirin emailka xiisaha. Tani waxay noqon kartaa wax aad u dhib badan marka aad ka warqabto in aad tahay inaad ku soo celiso kala soocida usbuuca soo socda.
Tani waxay muujineysaa sida dhibaatada e-mailku u kordho, iyadoo leh waxyaabo badan oo aan loo baahnayn oo soo socda oo kuugu imanaya sanduuqaaga ilaa ilaa dhibic halkaas oo aad rabto inaad ka tirtirto koontada oo dhan - stylish winter headwear wholesale. Si kastaba ha ahaatee, tani maaha suurto gal tan iyo emailka uu ku xiran yahay Facebook, eBay, PayPal, iwm, iyo tirtiridda emailka waxay keeni doontaa dhibaato leh nooc nooc gaar ah.
Ross Barber, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guud ee Macaamiisha, ayaa sheegay in afartii xeeladood ee soo socda ay ka caawisay inuu ka soo kabsado xisaabtamihiisa:
1. Raadi ilaha inta badan kuu soo diraya emayl aan loo baahnayn. Ha qaadin habka caajiska ah ee keenaya in la tirtiro emaylka. Furan mid kasta oo ka mid ah iyaga oo iska dhaafa kadibna ka dib, raadi cinwaanka diraha ee emailkaaga. Kadibna, waxaa loo tixgelinayaa in ay nabdoon tahay in la tirtiro walxo kasta oo ka soo baxa liiska natiijada. Iyadoo lagu sababaynayo xaqiiqda ah in aad haysato shuruudaha, waxaad ka heli doontaa emaylka ilahaas.
2. Sharcigu wuxuu u baahan yahay in dhammaan emailada ganacsigu ay leeyihiin ikhtiyaar ikhtiyaar ah. Inkasta oo shuruudaha, waxaan ogaaday in badankoodu emails aan la rabin ka maqan ama baabi'iyo sifooyinka. Markaad ogaato in aad ka heshay email ka timid ilo aan lahayn ikhtiyaar ah inaad ka baxdid, soo dir emailka soo socda:
"Fadlan qaado (gali cinwaanka emailkaaga) farriintan ka soo liiska" Thanks "!
Looma baahna inaad ku darto macluumaad kale tan iyo e-maylka. Waa inaad ka filataa jawaabta foomka "Baas!" sida caddayn in aad si guul leh wax uga qabatay arrinta emails aan la rabin.
3. Abuuritaanka faylasha waxay kuu sahleysaa inaad si habsami ah u socoto adigoo u soo diraya emails. Tani waa fara-galinta ugu fiican ee la xidhiidha maareynta emailkaaga tan iyo markii ay kaa caawinayso inaad la xaajootid emails soo galo oo aad nadiifiso sanduuqa boostada. Tusaale ahaan, waxaan abuuray todobo qaybood oo email ah oo aan ku siiyey magacyo kala duwan iyagoo ku xiran doorka ugu muhiimsan. Haddii aan rabo inaan ku keydiyo email, waxaa si fiican loogu kaydin doonaa mid ka mid ah faylashaas. Tani waxay muhiim u tahay hubinta in sanduuqdayda ay tahay mid nadiif ah oo cusub mar kasta.
4. Markaad awoodday inaad hagaajiso emailkaaga, waxaad u maleyneysaa inuusan dib ugu noqonaynin xaaladdiisii ​​hore. Hagaajinta sanduuqaaga boostada adiga oo hubinaya in aad wax ka qabato email aan loo baahnayn isla markiiba. Haddii aad tan dib u dhigto, waxaa laga yaabaa inaad adigu kumanaan emayl u raadineyso si aad u xalliso hal mid. Marka mar labaad boostada aan la rabin, waxaad wax ka qaban kartaa xaaladda adoo ku celinaya hal tallaabo iyo laba.